Fizahan-tany momba ny morontsirak'i Mediterane: mandoa ny elo maimaimpoanao na voatsatoka antsy!
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahan-tany momba ny morontsirak'i Mediterane: mandoa ny elo maimaimpoanao na voatsatoka antsy!
Aogositra 7, 2018
Aloavy ny elo maimaimpoana sao voatsatoka antsy ianao. Ity no vintana mety horaisin'ireo mpizaha tany rehefa miala sasatra amin'ity morontsiraka amoron'ny Ranomasina Mediterane ity. Ny andian-jatovo tsy an'asa dia nanomboka nifehy ny morontsiraka tamin'ny 2015 taorian'ny nifaranan'ny ady an-trano Alzeriana - rehefa zara raha teo ny fanjakana - fomba iray mora ahazoana vola amin'ny mpizahatany.
Mety tsy niova firy izy io tato ho ato. Ny sehatry ny fizahan-tany any Algeria dia mety manana fari-dranomasina Mediteraneana, na izany aza, tsy dia be loatra raha tsy te-ho any ireo mpizahatany noho ny tahotra ny hanatonan'ny Beach Umbrella Mafia.
Ny tanànan'i Alger dia manome elo amoron-dranomasina hampiasain'ny mpizahatany, fa ny sasany kosa nanangona elo mba hahafahan'izy ireo manome vola ny mpizahatany hanofa azy ireo.
Raha ny filazan'ireo olona avy ao anatiny dia mahafantatra tsara ny tanàna ary mety ho anisan'ity fanendahana ity. Noho izany dia mitodika any amin'ny lalana hafa izy ireo raha toa ka tsy terena handoa ny elo ireo mpizahatany.
Tamin'ny tranga iray manokana, nilaza tamin'ny mpizahatany ny Mafia fa tsy maintsy mivoaka ny morontsiraka izy ireo rehefa mandà tsy handoa payon fa te hampiasa ny fitaovany amoron-dranomasina manokana. Nandritra ny fifanandrinana nampihoron-koditra kokoa, mpizahatany iray izay tonga teny amoron-dranomasina niaraka tamin'ny fianakaviany no notafihana sy voatsatoka antsy rehefa avy naheno azy mpivarotra tsy ara-dalàna iray nitaraina momba ny vidin'ny fanofana fitaovana amoron-dranomasina izy.
Ny Minisitry ny atitany sy ny kolontsaina eo an-toerana dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny morontsiraka, ary nilaza izy fa mino ny morontsiraka malalaka. Nangataka ny minisiterany ny governemanta tanànan'ny tanàna amoron-dranomasina mba hamoaka lalàna hananana mpitantana iray hiandraikitra ny fanaraha-maso mpitandro ny filaminana hanara-maso ny morontsiraka, saingy mbola tsy nahomby io lalàna io hatreto.
PATA sy The Travel Corporation hamaha ny fako amin'ny fizahan-tany
Trano fizahan-tany momba ny fizahan-tany: tsy dia ratsy loatra ny fanakorontanana